Xafladaha ciidda ee Finnishka - InfoFinland
Warar ku saabsan Finland > Warar aasaasi ah oo ku saabsan Finland > Dhaqamada iyo diimaha ka jira Finland > Xafladaha ciidda ee Finnishka
Xaflad-ciideedyada Finland waxey badankood kasoo jeedaan diinta Kirishtanka. Qaar ka tirsan xafadlaha ciiddu, tusaale ahaan ciidul-masiixiga iyo pääsiäinen waa maalmaha fasaxa ee caadiga ah. Markaas dukaamo iyo hay’adaha dowladduba waa xiran yihiin.
Hal qaab oo loo xafladeeyo waa in calanka la suro birta calanka. Maalmo cayiman oo ku qoran kalantarka ayaa Finland calanka la taagaa. Hay’adaha dowliga ah iyo dadka caadiga ah labaduba waa ka qeybqaataan maalmaha calanka la taago. Calanku wuxuu Finland ka yahay arrin loo xafladeeyo.
Boggan waxaa si kooban loogu sharraxayaa qaar ka tirsan xaflad ciideedyda Finnishka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan maalmaha calan taagista waxaad ka heleysaa bogagga xafiiska almanakka ee jaamacadda Helsinki. Macluumaadka xafladaha Kirishtaanka waxaad ka aqrisan kartaa bogga kaniisadda Efangelis-luteeriga.
Suomen kalenterin juhlapäivätFinnish | Iswidish | Ingiriis
Kristilliset pyhäpäivätFinnish | Iswidish
Maalinta ka horeysa Sanadka cusub ee 31 Disembar oo maalinta sanadka u dambeyso. Markaas waxaa la qabanqaabiyaa bulaleyro. Dukaanka ayaa laga soo iibsan karaa gantaallada. Ganitaanka gantaallada waxaa loo qariray waqti cayiman.
Dhammaadka ciidda Masiixiga
Dhammaadka ciidda Masiixiga ee 6.1 waa xafladda gunaanadka ciidul Masiixiga. Markaas waxaa la xusaa saddex saadaaliye, kuwaas oo hadiyado u keenay Nabi Ciise oo dhallaan ah.
Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) waa gabyaa Finnish ah islamarkaasna muhiim ah. Maalinta Runeberg 5.2. waxaa la cunaa doolshaha Runeberg.
Maalinta saaxiibka 14.2. waxaa saaxiibka lagu xusuusan karaa in ubax loo keeno ama kaar loo diro. Maalinta saaxiibka Finland loogama xuso si u weyn sida tusaale ahaan looga xuso Mareykanka.
Ciidda billowga soonka Kirishtaanka
Ciidda billowga soonka Kirishtaanku waxey billowdaa diyaargarowga iistarka. Finland waxaa Ciidda billowga soonka Kirishtaanka laga dhaadhacaa buurta waxaana la cunaa burka ciidda billowga soonka Kirirshtaanka, kaas oo ay ku jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin burcad.
Iistarku waa xaflad Kirishtaan. Waqtiga uu soo galo waa isbeddelaa laakiin inta badan waxaa loo dabbaaldegaa iistarka Maarso ama Abriil. Iistarka ka hor waxaa soo gala Axadda geedtimirka. Carruur sixirey oo kale u soo labisatay ayaa waxey keena laamo geedeed la soo sharraxay. Waxaa iyaga inta badan la siiyaa hadiyo yar tusaale ahaan xoogaa nacnac ah.
Jimcaha dheer ee ka horreysay iistarka waxaa la xusaa dhimasha Nabi Ciise. Axadda Iistarka waxaa la xusaa aadista samada ee Nabi Ciise. Xafladda iistarku waxey sii socotaa axadda ka dib isniinta, yacni maalinta labaad ee iistarka. Waxaa inta badan iistarka la cunaa hilibka idaha, ukumaha iistarka oo laga sameeyay shukulaato iyo macmcaan.
Xuska samo u qaadista Masiixiga
Xuska samo u qaadista masiixigu waxey gadaal u gashaa Kirishtaanka. Xuska samo u qaadista Masiixiga waxaa la xusaa 40 maalmood ka dib iistarka.
Maalinta shaqaalaha 1.5. waa xafladda gu’ga iyo dadka shaqeeya. Maalinta shaqaalaha siyaabo kala duduwan ayaa looga dabbaaldegaa Finland. Dadku waxey isugu yimaadaan duurbax ama maalinjoog. Maalinta shaqaalaha waxaa la cunaa bur macaan waxaana la cabaa khamari, oo yara sharaabka lamid ah. Khamriga fiinadu waxey inta badan qeyb ka tahay xafladda. Guryaha waxaa lagu sharrixi karaa buufinno iyo serbantiini. Ardayda dugsiyada sare ka baxday waxey inta badan madaxa soo saartaan koofida ardayga dugsiga sare. Shaqaaluhu waxey qaban-qaabiyaan gaardiska maalinta shaqaalaha.
Maalinta hooyada waxaa Finland laga xusaa axadda labaad ee bisha Maajo. Waxaa hooyooyinka lagu xusaa tusaale ahaan hadiyado iyo ubaxyo.
Xuska bartamaha xagaaga
Xuska bartamaha xagaaga waxaa la xusaa dhammaadka bisha Juun. Xuska bartamaha xagaagu waa xafladda bartamaha xagaaga. Dad badan oo Finnish ah waxey xuskan jecelyihiin in ay ku qaataan cariishka xagaaga. Shidista tubaal dabeed weyn waxey ka mid tahay soo jireenka xuska bartamaha xagaaga ee Finnishka. Koonfurta Finland waxaa dhici karta in laga taago baallaha xuska bartamaha xagaaga.
Maalintan fasax diimeedka ah waxaa la qabtaa billowga Nofeembar. Waxaa markaas la xusaa dadka dhintey. Dadku waxey shumacyo geeyaan xabaalaha ehelkooda. Isla waqtiyadaas waxaa sidoo kale la xusaa Haloween. Si kastoo ay ahaatase maalintan fasax ciideedku ma ahan sida Haloweeniga oo kale ee waa xaflad qiimo leh islamarkaasna deggan.
Maalinta aabaha waxaa Finland laga xusaa axadda labaad ee Nofembar. Waxaa aabaha lagu xusaa hadiyado kala duduwan.
Finland waxey xorowday sanadki 1917. Waxaana maalinta xorriyadda loo dabbaaldegaa 6.12. Markaas Finnish badan waxey telefishinka ka daawadaan xafladda maalinta xorriyadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda.
Kirismasku waa xafladda ugu muhiimsan Finland. Waxaa markaas la xusaa dhalashada Nabi Ciise. Maalinta xafladda ee rasmiga ah waa 24.12 oo ah maalinta ka horeysa kirismaska. Dad badan waxey guryohooda keensadaan geedka kirismaska oo la qurxiyo. Hadiyadaha kirismaska waxaa inta badan la qeybiyaa maalinta ka horeysa kirismaska. Kirismaska Finnishka waxaa ku jira cunto-xafladeedyo badan, sida doofaarka kirismaska, ansalaato iyo xidid case, cuntooyin kala duduwan, tortiga kirismaska iyo doolshe. Kirismaska waxaa wax badan la qaadaa heesaha kirismaska waxaana waqti lala qaataa qoyska iyo ehelka kale
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 05.06.2020 Boggan war-celin ka soo dir